Home Page - MoeKaungKin Express
စာဖြင့်စုံစမ်းရန် : info@moekaungkinexpress.com
09 260 666 008
Member Card Discount
ရန်ကုန် ထားဝယ် အထူးကား သို့မဟုတ် ရန်ကုန် မြိတ် အထူးကား စီးသူတိုင်း မိုးကောင်းကင်ရဲ့ အမြဲတမ်း မန်ဘာဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ် အထူးကား စီးပြီးလို့ရှိရင် ရန်ကုန်ဂိတ်မှာ မန်ဘာကဒ် ရယူပါ မန်ဘာကဒ်နဲ့ဝယ်ရင် ဘယ်ခရီးစဉ်မဆို
မိုးကောင်းကင် အဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမှ အသွားအပြန်ခရီးစဉ်များ ✓ ရန်ကုန် ⇋ မန္တလေး ✓ ရန်ကုန် ⇋ မုံရွာ ⇋ ပုလဲ ⇋ အရာတော် ✓ မုံရွာ နေပြည်တော်
ကုန်ပစ္စည်းများကို ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်လိုသော နေရာများသို့ ဖုန်းတစ်ချက်ဆက်ရုံလေးနဲ့ လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာဖြင့် အရောက်ပို့ပေးခြင်းများအား ဝန်ဆောင်မှု စတင်နေပါပြီ။ မိတ်ဆွေ ဒီနံပါတ်လေးတွေကိုသာ ဆက်လိုက်ပါ။ ✓ 09 - 7320 8028 ✓ 09
ခရီးသွား ရဟန်း ရှင်လူ မိဘပြည်သူများ အဆင်ပြေစွာ လက်မှတ်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် ကား၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အသံဖြင့်ဖြေကြားပေးကာ AYA Bank တွင် Account No. 0094101010000926 သို့ ငွေစာရင်းဖွင့်ခြင်းအား လူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်လာစရာမလိုပဲ
မိုးကောင်းကင် အဆင့်မြင့်ခရီးသည်ပို့ဆောင်ရေးမော်တော်ယဉ်အသင်းသည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ ဘေးကင်းစိတ်ချရသည့် ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ဆွီဒင်နိုင်ငံထုတ် SCANIA Marcopolo Bus ကားအသစ်များဖြင့် ခရီးသွားမိဘပြည်သူများအတွက် အသွားအပြန်ခရီးစဉ်များကို ပြေးဆွဲပေးလျှက်ရှိပါသည်။
လုံခြုံ၊ စိတ်ချ၊ သက်သာ၊ ဆင်ပြေ၊ တိကျ၊ ချိန်မှန်၊ မြန်ဆန်ဖို့ မိုးကောင်းကင်ကို စီးကြစို့။
ခရီးစဉ်တလျှောက် ပြည့်စုံ၊ ရွှင်လန်း၊ ကျေနပ်၊ အားရ မိုးကောင်းကင်မှ စွမ်းဆောင်ပြ။
ရဟန်း ရှင်လူ မိဘပြည်သူ ဆင်ပြေလွယ်ကူ လက်မှတ်ဝယ်ယူ ဖုန်းတစ်ချက်ဆက် အိမ်အရောက်ပို့ မိုးကောင်းကင်မှ အခမဲ့ကူ။
မိုးကောင်းကင် ခရီးသွားလက်မှတ် များများဝယ် များများလျော့ အစီအစဉ်။
🎶မိုးကောင်းကင်ရဲ့ ခရီးစဉ်အသစ်နှင့် မိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်🎶 အမေးအဖြေ အစီအစဉ်မှာ စစ်တွေခရီးစဉ်ပြေးဆွဲပေးဖို့ အကြံပြုထားတဲ့ မိုးကောင်းကင် ခရီးသွားများအတွက် ရန်ကုန် စစ်တွေ တိုက်ရိုက်ခရီးစဉ်ကို ယခုလ ၂၆ ရက်နေ့က စပြီး ဆွီဒင်နိုုင်ငံထုတ် ၂+၂
moekaungkinexpress0comment
မိုးကောင်းကင် ခရီးစဉ် ရန်ကုန်ထားဝယ် မြိတ်ကော့သောင်း နှင့် ခရီးစဉ် အားလုံး အကြိုနေမတိုင်ခင် ၁၂ ရက် နေ့နောက်ဆုံး ကားတွေအကုန် ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပြီး ဂိတ်ပိတ်ပါတယ် နှစ်ဆန်း တရက်နေ့ကို ခရီးစဉ်အား လုံးပြန်ထွက်ပါတယ်
Latest Promotion (14 Dec ~2Jan)
လာမယ့်နှစ်သစ် ၂၀၁၇ ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ အဓိကကတော့ မိုးကောင်းကင်မိသားစုမှ အမြဲတမ်း အားပေးကျတဲ့ ခရီးသွားပြည်သူများအတွက် ကျေးဇူးတင်သော အားဖြင့် အထူး Promotion စတင်နေပါပြီလို့စ် ဒီကနေပြောပြပါရစေ ရိုးရိုး scania 2+2 ရော
မိုးကောင်းကင်ကားနဲ့ခရီးသွားကြည့်တာ ဝန်ဆောင်မှုတွေက ကောင်းပါတယ်အဆင်လည်းပြေပါတယ်
Pyae Pyae Facebook Comment
ဘေးဘယာကင်းကွာ လုပ်ငန်းဆောင်တာအောင်မြင်စွာ နှစ်ပေါင်းရာချီအဓွန့်ရှည်ပါစေ။
Kyaw Gyi Thu Aung Facebook Post
အဆင်ပြေပါတယ် ကားပေါ်က ဝန်ထမ်းတွေကလည်း ဖော်ရွေကြပါတယ် မိုးကောင်းပင်ဘဲ စီးဖြစ်ပါတယ် ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေ
Nanda Ma Facebook Comment
မိုးကောင်းကင်နဲ့ယင်းမာပင်မြို့လေးဆီသွားဖူးပါတယ် အဆင်ပြေတာထက်ကိုသာလွန်ကောင်းမွန်ပါတယ် မိသားစုသဖွယ်ကြင်နာမှုအပြည့်နဲ့လမ်းခရီးမှာစောင့်ရှောက်ပါတယ် လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့driverကြီးရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရယ် ပြောမဆုံးနိုင်အောင်ကျေနပ်ပါတယ်
Tar Zan Facebook Comment
Chitsu Ko Ko Facebook Comment
"မိုးကောင်းကင်" မိသားစုမှ လူကြီးမင်းရဲ့ အကြံဥာဏ်များကို တောင်းခံလိုပါသည်။
ယခုလို သင့်အချိန်ကိုပေးပြီး မေးခွန်းများကို ဖြေဆိုပေးတဲ့ အတွက် မိုးကောင်းကင် မိသားစု မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ယခုထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုများကို ထပ်မံ ဆောင်ရွက်သွားဖို့ အစီအစဉ်များလည်း ရှိပါတယ်။
"Just with Moekaungkin,you can travel the whole myanmar from North to South"
လက်မှတ်-09-428626731, 09-73208028, ‪09-5161881‬, ‪09-260666008‬, 09-260666009, 09-8626731, 01-637644
ရုံးခွဲများကို ဆက်သွယ်ရန် »
Copyright © 2016. MoeKaungKin Express. All Rights Reserved.